बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा नखानुहोस् यी खानेकुरा !! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वास्थयलाई ठीक राखिराख्न हामीले धेरै प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । यसका लागि हामी व्यायाम गर्छौं। राम्रा राम्रा कुराहरु मात्र खान्छौ।
यसरी हेर्दा त हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या नै नआउनुपर्ने हो। तर, कुन खानेकुरा कतिबेला खाने भन्ने जानकारी नहुँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको हुन्छ । कुनै खाद्यान्नमा सामग्रीमा एसिडको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसलाई खाली पेटमा खाँदा वा पिउँदा स्वास्थ्यमा नोक्सान पुग्दछ।
दही, काँचो गोलभेँडा, केरा आदि खाली पेटमा खानु राम्रो मानिँदैन। तर मनतातो पानी पिएर दिनको असल सुरुवात गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म कि खाली पेटमा चिया र कफी पिउनु पनि हानिकारक हुन्छ। खाली पेटमा के खानुहुँदैन ? यहाँ केही जानकारी दिने प्रयत्न गरिएको छ।
मसलेदार चिल्लो पिरो भोजन
तपाईलाई जतिसुकै भोक लागोस् तर खाली पेटमा चिल्लो पिरो र मसलेदार खाना खानु हुँदैन । यसमा हुने प्राकृतिक अम्लले पेटको पाचन क्षमता बिगार्दछ । यसले पेट दुख्ने समस्या बढाउँछ।
लेमन सोडा भन्दा राम्रो सफ्ट पेय पदार्थ अरु छैन । यसमा चिनी पनि राख्नुपर्दैन । सोडा, पानी, कागती र बरफलाई मिलाएर एक रिफ्रेशिंग पेय पदार्थ बन्दछ । यसमा पोटासियम र इलेक्ट्रोलाइट पनि मिलेको हुन्छ । तर यसमा उच्च मात्रामा कार्बोनेट एसिड पनि हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यदि तपाईं यसलाई खाली पेटमा पिउनु हुन्छ भने यसले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ।
खाली पेटमा केरा खाँदा शरीरमा म्यानेसियमको मात्रा अत्यधिक बढ्दछ । यसले शरीरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको मात्रा असन्तुलित हुन्छ । यसर्थ, खाली पेटमा केरा खाँदा ग्यास्ट्रिक एसिडको समस्या बढ्दछ र यसबाट पेटमा गहिरो दुःखाई हुनसक्छ।
गोलभेँडामा अत्यधिक मात्रामा एसिड हुन्छ । यदि यसलाई खाली पेटमा खायो भने यसले प्रतिक्रिया गर्दछ र पेटमा अघुलनशील जेलको निर्माण हुन्छ, जसले पेटमा पत्थर बन्दछ किनकी गोलभेँडा भिटामीन ए, सी, के, फोलेट र पोटासियमको राम्रो स्रोत हो । गोलभेँडामा सन्तृप्त वसा, कोलेस्ट्रोल, क्यालोरी र सोडियम स्वभाविक रुपमा कम हुन्छ । थियमिन, नियासिन, भिटामिन बी–६, म्याग्नेसियम, फस्फोरस र तांबा पनि प्राप्त हुन्छ ।
खाली पेटमा कफीको सेवन बिष पिएजस्तो हुनसक्छ । किनकी यसले कैफिन हुन्छ, जसले खाली पेटमा पर्दा तपाईंलाई ठूलै समस्या निम्त्याउन सक्छ । यदि तपाई त्यतिबेला तपाईंलाई कुनै खानेकुरा मिलेन भने एक गिलास पानी मात्र पिउनुहोस्।
जसरी कफी पिउनु राम्रो हुँदैन, त्यसरी नै खाली पेटमा चिया पनि नपिउनुहोस् । किनकी चियामा उच्च मात्रामा एसिड हुन्छ । जसले पेटमा पीडा हुनसक्छ।
रक्सी पिउनी भन्दा अगाडि तपाईंको पेट खाली हुनुहुँदैन, त्यसर्थ, पहिले नै केही खानुहोस्। खाली पेटमा रक्सी पिउँदा पेटमा जलन हुन्छ जसकारण खाना पनि राम्रोसँग पच्दैन । यसबाट तपाईंलाई बान्ता पनि हुनसक्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 24 = 30